तँ कोप्रति निष्ठावान् छस्? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
अहिले, प्रत्येक दिन तिमीहरू जिउनु महत्वपूर्ण छ र तिमीहरूको गन्तव्य र तिमीहरूको भवितव्यको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले तिमीहरूले आफूसँग आज भएको सबै कुरालाई सम्हाल्नुपर्छ र बित्ने प्रत्येक मिनेटलाई महत्त्व दिनुपर्छ। तिमीहरूले यो जीवन व्यर्थमा बाँच्नु नपरोस् भन्नाका खातिर आफूलाई उच्चतम लाभहरू दिनलाई सकेसम्म धेरै समय दिनुपर्दछ। तिमीहरू मैले किन त्यस्ता वचनहरू बोलिरहेको छु भन्ने कुराले अन्योलमा पर्न सक्छौ। नलुकाई भन्नुपर्दा, म तिमीहरूमध्ये कसैको व्यवहारबाट अलिकति पनि खुसी छैन, किनकि मैले तिमीहरूबाट जस्तो आशा राखेको थिएँ त्यो तिमीहरू आज जस्तो छौ त्यस्तो थिएन। तसर्थ, म भन्न सक्छु, तिमीहरूमध्ये प्रत्येक जना खतराको जोखिममा छौ र तिमीहरूले विगतमा मद्दतको लागि गरेको हारगुहार, अनि सत्यतालाई पछ्याउने र प्रकाशको खोजी गर्ने तिमीहरूका पहिलेका आकांक्षाहरू अन्त्यमा पुग्न लागेका छन्। यो तिमीहरूको प्रतिपूर्तिको अन्तिम प्रदर्शन हो र यो त्यो कुरा हो जुन मैले कहिल्यै अपेक्षा गरेको थिइन। म तथ्यहरूको विपरीत बोल्न चाहन्न, किनकि तिमीहरूले मलाई एकदमै निराश बनाएका छौ। सायद तिमीहरू यसलाई स्वीकार्न चाहँदैनौ, वास्तविकताको सामना गर्न चाहँदैनौ—अझै पनि मैले तिमीहरूलाई यो कुरा गम्भीर रूपमा सोध्नुपर्छ: यी सारा वर्षहरूमा, तिमीहरूको हृदय वास्तवमा केले भरिएको छ? तिनीहरू कोप्रति निष्ठावान् छन्? यी प्रश्नहरू यत्तिकै आएका हुन् नभन र मैले यस्ता कुराहरू किन सोधेँ भनेर मलाई नसोध। यो कुरा जान: यसको कारण के हो भने, म तिमीहरूलाई राम्रोसँग चिन्छु, तिमीहरूको एकदमै ख्याल गर्छु र तिमीहरूको आचरण र कार्यहरूमा मैले मेरो हृदय धेरै नै दिएको छु, त्यसकारण मैले तिमीहरूलाई अटुट रूपमा लेखा प्रस्तुत गर्न र तीतो कठिनाइ वहन गर्न बोलाएको छु। अहिलेसम्म तिमीहरूले मलाई उदासीनता र सहनै नसकिने त्याग बाहेक कुनै पनि कुरा दिएका छैनौ। तिमीहरू मप्रति ज्यादै लापरवाही भएका छौ; के मलाई यसको बारेमा केही पनि थाहा नहुनु सम्भव छ र? तैँले विश्‍वास गर्ने कुरा यही हो भने, यसले तैँले मलाई दयाको साथमा साँचो रूपले व्यवहार गर्दैनस् भन्‍ने तथ्यलाई थप रूपमा प्रमाणित गर्छ। त्यसैले त म भन्छु, तिमीहरूले आफूलाई सत्यबाट लुकाउँदै छौ। तिमीहरू यति चलाख छौ कि तिमीहरूलाई आफूले के गर्दै छु भन्ने समेत थाहा छैन—त्यसैले तिमीहरूले मलाई लेखा प्रस्तुत गर्न के प्रयोग गर्नेछौ?
वास्तवमा तिमीहरूको हृदय कोप्रति निष्ठावान् छ भन्‍ने प्रश्‍न नै मेरो लागि सबैभन्दा चासोको प्रश्‍न हो। मलाई आशा छ, तिमीहरूमध्ये प्रत्येकले आफ्ना सोच व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नेछौ र तिमीहरू कोप्रति निष्ठावान् छौ र कसको लागि तिमीहरू बाँच्छौ भनेर आफैलाई सोध्‍नेछौ। सायद तिमीहरूले कहिल्यै पनि यी प्रश्नहरूमा ध्यानपूर्वक विचार गरेका छैनौ, त्यसैले मैले तिमीहरूका निम्ति उत्तरहरू प्रकट गरिदिँदा कस्तो होला?
सम्झना भएका जोकोहीले पनि यो तथ्यलाई स्वीकार्नेछ: मानिस आफ्नो लागि बाँच्छ र आफैप्रति निष्ठावान् हुन्छ। मलाई तिमीहरूका जबाफ पूर्णतया सही छन् भन्‍ने विश्‍वास छैन, किनकि तिमीहरू प्रत्येक आ-आफ्नै जीवनमा रहन्छौ र प्रत्येकले आफ्नै पीडामा सङ्घर्ष गर्दै छौ। यस्तो भएकोले, तिमीहरू आफूले प्रेम गर्ने मानिसहरूप्रति र तिमीहरूलाई खुसी बनाउने वस्तुहरूप्रति निष्ठावान् छौ; तिमीहरू आफूप्रति सम्पूर्णतया निष्ठावान् छैनौ। तिमीहरू प्रत्येक आफ्ना वरिपरिका मानिस, घटना र वस्तुहरूबाट प्रभावित भएकोले, तिमीहरू आफूप्रति साँचो रूपमा निष्ठावान छैनौ। तिमीहरू आफूप्रति निष्ठावान् हुनुपर्छ भन्‍ने कुरालाई समर्थन गर्नको लागि होइन, बरु अन्य कुराप्रति तिमीहरूको निष्ठा भएको खुलासा गर्नको लागि मैले यी वचनहरू बोलेको हुँ, किनभने यत्तिका वर्षसम्म, मैले तिमीहरूमध्ये कसैबाट पनि निष्ठा प्राप्त गरेको छैन। तिमीहरूले यत्तिका वर्षसम्म मलाई पछ्याएका छौ, तर अहिलेसम्म मलाई निष्ठाको एक टुक्रा पनि दिएका छैनौ। बरु, तिमीहरू आफूले प्रेम गर्ने मानिस र आफूलाई खुसी बनाउने कुराहरूको वरिपरि घुमिरहन्छौ—यहाँसम्‍म कि हरेक समयमा र तिमीहरू जहाँसुकै जाँदा पनि तिमीहरूले ती कुराहरूलाई आफ्नो हृदयको नजिक राख्छौ र कहिल्यै तिनलाई त्याग्‍दैनौ। जब तिमीहरू आफूले प्रेम गर्ने कुनै पनि कुराप्रति उत्सुक वा उत्साहित हुन्छौ, यस्तो त तिमीहरूले मलाई पछ्याउँदा पनि हुन्छ वा तिमीहरूले मेरा शब्दहरू सुनिरहँदा पनि हुन्छ। त्यसकारण, म भन्छु, मैले तिमीहरूसँग मागेको निष्ठालाई तिमीहरूले आफ्ना “प्रिय वस्तु” हरूप्रति निष्ठावान् हुन र तिनीहरूलाई प्रेमसाथ सम्हाल्न प्रयोग गरिरहेका छौ। तिमीहरूले मेरो लागि एक-दुई ओटा कुरा बलिदान गरे तापनि, यसले तिमीहरूको सबै कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन र तिमीहरू साँचो रूपमा मप्रति नै निष्ठावान् छौ भन्‍ने बताउँदैन। तिमीहरूले आफूले चाहेका कुराहरूमा नै आफूलाई संलग्न गराउँछौ; केही मानिसहरू छोरा र छोरीहरूप्रति निष्ठावान् हुन्छन् भने अरूहरूचाहिँ पति, पत्नी, धन, काम, हाकिम, हैसियत वा महिलाहरूप्रति निष्ठावान् हुन्छन्। तिमीहरू आफू निष्ठावान् भएका कुराहरूप्रति कहिल्यै थकित वा क्रोधित बन्दैनौ; बरु, तिमीहरूले बढी मात्रामा र बढी परिमाणमा ती कुराहरू पाउन इच्‍छा गर्छौ र कहिल्यै पनि हरेस खाँदैनौ। म र मेरा वचनहरू जहिले पनि तिमीहरूले चाहेका कुराहरूभन्दा पछाडि धकेलिन्छन्। अनि ती कुराहरूलाई अन्तिम दर्जा दिनु बाहेक तिमीहरूसँग अरू कुनै विकल्प हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले आफूले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन बाँकी रहेका कुराहरूका लागि निष्ठावान् हुनको लागि अन्तिम स्थान साँचेर राख्छन्। उनीहरूको हृदयमा मेरो हल्का छाप समेत छैन। तिमीहरूले सोच्छौ होला, मैले तिमीहरूलाई धेरै नै मागिरहेको छु वा तिमीहरूलाई गलत तरिकाले आरोप लगाइरहेको छु—तर के तिमीहरूले आफ्नो परिवारसँग खुसीसाथ समय बिताइरहेको बेला तिमीहरू मप्रति एक पटक पनि निष्ठावान् भएका छैनौ भन्‍ने तथ्यको बारेमा कहिल्यै सोचेका छौ? यस्ता समयहरूमा, के यसले तिमीहरूलाई पीडा दिँदैन? जब तिमीहरूका हृदय आनन्दले भरिन्छ र तिमीहरूलाई तिमीहरूका परिश्रमको इनाम दिइन्छ, के तिमीहरू आफू पर्याप्त सत्यले सुसज्जित नभएकोमा निरुत्साहित महसुस गर्दैनौ? तिमीहरू मेरो स्वीकृति प्राप्त नगर्दा कहिले रोएका छौ? तिमीहरूले आफ्ना छोरा र छोरीहरूको लागि आफ्‍नो दिमाग घोट्छौ र ठूलो पीडा भोग्छौ, तर पनि तिमीहरू सन्तुष्ट छैनौ; अझै पनि तिमीहरू तिनीहरूका खातिर लगनशील भएका छैनौ, तिनीहरूका लागि आफूले गर्न सक्ने सबै कुरा गरेका छैनौ भन्‍ने विश्‍वास गर्छौ। यद्यपि मप्रति भने तिमीहरू सधैँ नै असावधान र लापरवाही भएका छौ; म तिमीहरूको सम्झनामा मात्र छु, तर म तिमीहरूको हृदयमा रहन सक्दिन। मेरा समर्पण र प्रयासहरूलाई तिमीहरूले कहिल्यै अनुभव गरेनौ र तिनलाई कहिल्यै कुनै पनि कदर गरेनौ। तिमीहरू केवल क्षणिक रूपमा तिनको बारेमा विचार गर्छौ र यति नै पर्याप्त हुनेछ भन्ने विश्‍वास गर्छौ। यस्तो “निष्ठा” मैले लामो समयदेखि खोजेको निष्ठा होइन, बरु त्यो त मैले लामो समयदेखि घृणा गरेको कुरा हो। तथापि, मैले जेसुकै भने पनि तिमीहरूले एक-दुई ओटा कुरा मात्र स्वीकारिरहन्छौ; तिमीहरूले यसलाई पूर्णतया स्वीकार्न सक्दैनौ, किनकि तिमीहरू सबै अत्यन्तै “विश्‍वस्त” छौ र मैले बोलेका वचनहरूबाट के स्वीकार्ने त्यसलाई चयन गरी लिन्छौ। तिमीहरू आज पनि यस्तै छौ भने, तिमीहरूको आत्मविश्‍वासलाई ठीक गर्ने केही विधिहरू मसँग छन्—र त्यति मात्र होइन, मेरा सबै वचनहरू सत्य छन्, र तीमध्ये कुनैले पनि तथ्यहरूलाई विकृत गर्दैनन् भनेर म तिमीहरूलाई स्वीकार गर्ने तुल्याउनेछु।
यदि अहिले मैले तिमीहरूको अगाडि केही पैसा राखेँ र तिमीहरूलाई छनौट गर्ने स्वतन्त्रता दिएँ भने—र मैले तिमीहरूको छनौटको लागि तिमीहरूलाई दोष लगाइन भने—तिमीहरूमध्ये धेरैजसोले पैसा छनौट गरेर सत्यलाई त्याग्‍नेथियौ। तिमीहरूमध्ये उत्तम व्यक्तिहरूले पैसालाई त्यागेर मन नलागी-नलागी सत्यतालाई छनौट गर्नेथियौ, जबकी दोधारेहरूले एउटा हातले पैसा हडप्नेथिए र अर्को हातले सत्यता टिप्नेथिए। तिमीहरूको साँचो रङ त्यसपछि आफै स्पष्ट नहोलान् त? तिमीहरूले सत्यता र तिमीहरू निष्ठावान् भएको कुनै कुराको बीचमा छनौट गर्दा, तिमीहरू सबैले यही छनौट गर्थ्यौ र तिमीहरूको मनोवृत्ति उस्तै रहन्थ्यो। के त्यो यस्तै हो नि, होइन र? के तिमीहरूमध्ये धेरै जना सही र गलतको बीचमा घरी यता र घरी उता गरेका व्यक्तिहरू होइनौ र? सकारात्मक र नकारात्मक, कालो र सेतो बीचको प्रतिस्पर्धामा, तिमीहरूले परिवार र परमेश्‍वर, छोराछोरी र परमेश्‍वर, शान्ति र अवरोध, सम्पत्ति र गरिबी, हैसियत र साधारणपन, समर्थन पाउनु र पन्छाइनु र यस्तै अन्य कुराहरूको बीचमा तिमीहरूले गरेको छनौटको बारेमा तिमीहरूलाई अवश्य नै थाहा होला। शान्तिपूर्ण परिवार र टुक्रिएको परिवारको बीचमा, तिमीहरूले पहिलोलाई नै छनौट गर्‍यौ र तिमीहरूले हिचकिचाहटविना त्यस्तो गर्‍यौ; धन र कर्तव्यको बीचमा, तिमीहरूले फेरि पहिलोलाई छनौट गर्‍यौ, यहाँसम्म कि किनारामा फर्किने इच्छा समेत राखेनौ;[क] विलासिता र गरिबीको बीचमा, तिमीहरूले पहिलोलाई छनौट गर्‍यौ; आफ्ना छोरा, छोरी, श्रीमती, श्रीमान अनि मेरो बीचमा छनौट गर्दा, तिमीहरूले पहिलोलाई छनौट गर्‍यौ; र धारणा र सत्यताको बीचमा, तिमीहरूले पहिलोलाई नै छनौट गर्‍यौ। तिमीहरूका सबै दुष्कर्महरूको सबै तरिकालाई सामना गरेको कारण, मैले तिमीहरूमाथिको विश्‍वासलाई गुमाएको छु। तिमीहरूको हृदय यसलाई कोमल बनाउने कार्यप्रति अत्यन्तै प्रतिरोधी छ भन्‍ने कुराले मलाई साँच्‍चै अचम्‍मित पार्छ। समर्पण र प्रयासका धेरै वर्षहरूले स्पष्ट रूपमा मलाई तिमीहरूको परित्याग र निराशाभन्दा धेरै अरू केही दिएन, तर तिमीहरूको लागि मेरा आशाहरू बितेको प्रत्येक दिनसँगै बढ्दै जान्छन्, किनकि मेरो दिन पूर्ण रूपमा सबैको अगाडि उदाङ्गो भएको छ। तैपनि तिमीहरू अँध्यारो र दुष्ट कुराहरूको खोजमा छौ र तीमाथिको आफ्नो पकडलाई खुकुलो गर्न अस्वीकार गर्छौ। त्यसो भए, तिमीहरूको परिणाम के हुनेछ? के तिमीहरूले कहिल्यै यसबारे ध्यानपूर्वक विचार गरेका छौ? यदि तिमीहरूलाई फेरि छनौट गर्न लगाइएको थियो भने, तिमीहरूको छनौट के हुनेथियो? के यो अझै पनि पहिलो नै हुनेथियो? के तिमीहरूले अझै पनि मलाई निराशा र दुर्भाग्यपूर्ण शोक ल्याइदिनेथियौ? के तिमीहरूको मुटुमा अझै पनि न्यानोपनको सानो टुक्रा बाँकी रहनेथियो? के तिमीहरू अझै पनि मेरो मुटुलाई सान्त्वना दिन के गर्नुपर्छ सोबारे अनभिज्ञ हुनेथियौ? यो समयमा तिमीहरू केलाई छनौट गर्छौ? तिमीहरू मेरा वचनहरूमा समर्पित हुन्छौ कि तिनीहरूप्रति निरस महसुस गर्छौ? मेरो दिन तिमीहरूकै आँखाअगाडि छ र तिमीहरूले जे देख्छौ सो नयाँ जीवन र एक नयाँ सुरुवातको विन्दु हो। यद्यपि, मैले तिमीहरूलाई के भन्‍नुपर्छ भने, यो सुरुवातको विन्दु पहिलेको नयाँ कामको आरम्भ होइन, तर पुरानोको निष्कर्ष हो। अर्थात्, अन्तिम कार्य यही नै हो। यस सुरुवातको विन्दुको बारेमा के असामान्य छ सो तिमीहरू सबैले बुझ्‍न सक्छौ भन्‍ने मलाई लाग्छ। तैपनि, एक दिन चाँडै तिमीहरूले यस सुरुवातको विन्दुको साँचो अर्थलाई बुझ्नेछौ, त्यसकारण हामी एकसाथ अघि बढौं र आउने समापनलाई स्वागत गरौं। यद्यपि, मलाई तिमीहरूको के कुराले निरन्तर चिन्ता गराउँछ भने, जब तिमीहरू अन्याय र न्यायको सामना गर्छौ, तिमीहरूले सधैँ पहिलोलाई छनौट गर्छौ। तैपनि, त्यो सबै तिमीहरूको अतीतमा छ। म पनि तिमीहरूको अतीतको सबै कुरा बिर्सने आशा गर्दछु, यद्यपि यो गर्न धेरै कठिन छ। तैपनि, यसो गर्ने धेरै राम्रो तरिका मसँग छ: भविष्यले अतीतलाई प्रतिस्थापन गर्न देओ र तिमीहरूको अतीतको छायालाई आजको तिमीहरूको साँचो रूपले ढाकिदेओ। यसरी, तिमीहरूलाई मैले फेरि पनि छनौट गर्न लगाउनुपर्छ: तिमीहरू वास्तवमा कोप्रति निष्ठावान छौ?
क. किनारामा फर्कनु: एक चिनियाँ उखान, जसको अर्थ “आफ्नै दुष्ट मार्गहरूबाट फर्कनु” भन्‍ने हुन्छ।
अघिल्लो: तेरो गन्तव्यका लागि पर्याप्त असल कार्यहरु तयार गर्
अर्को: गन्तव्यको सम्‍बन्धमा